ညဟာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ညဟာ တိတ်ဆိတ်နေတယ်။
Posted by Mr. MarGa on Apr 7, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 35 comments
ည… ဆိုတာ လူသားတွေ အိပ်စက် အနားယူတဲ့အချိန်ကိုး
သူတကာတွေ အိပ်နေချိန်မှာ ဒီမှာတော့ တစ်ယောက်ထဲ ငူငူငိုင်ငိုင်နဲ့
ခေါင်းထဲမှာ အတွေးတွေ ပြည့်ကျပ်နေတယ်။
ဂျောင်းဂျောင်းပြေးနေအောင် ချ ရေးချင်နေပေမင့် ဘယ်လို အစဆွဲထုတ်ရမှန်းမသိ
ထုတ်ထားသမျှ ရေးဖို့ အစလေးတွေကလဲ အကိုးအကားက မစုံသေး
စာ မရေးနိုင်တဲ့ အချိန်တုန်းကတော့ ရေးချင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ…….တွေးမိလိုက်တဲ့အတွေးတွေ…………
အခု စာရေးချိန်ရလို့ ရေးမယ်လုပ်တော့
တချို့ အတွေးတွေက ပူပူနွေးနွေး ရေးရမယ့်အရာတွေဆိုတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ အချိန်လွန်သွားပြီ
တချို့တွေက အပေါ်က ပြောတဲ့အတိုင်း အကိုးအကား ရှာရဦးမယ်
အခု ချရေးလိုက်ရင် သူများနားလည်ဖို့ မပြောနဲ့ ကိုယ်တိုင်တောင် ချာချာလည်မယ့်ပုံ။
ချာချာမလည်တဲ့ အရာတွေကျပြန်ရင်လဲ အချက်အလက် မစုံတာကြောင့် သတင်းအမှားဖြစ်နိုင်ချေကလဲ အတော်များနေပြန်ပေါ့။
စာရေးသူတစ်ယောက်ရဲ့ အလိုမပြည့်မှုဆိုတာ ဒါတွေလားမသိ။
ကိုယ်တိုင်လဲ ဆင်ခြေတွေ ပေးနေမှန်း သိနေတယ်။
ဒါပေမင့် ခံစားချက် မပါဘဲနဲ့လဲ စာကို မရေးချင် (ရသပဲဖြစ်ဖြစ် သုတပဲဖြစ်ဖြစ်)
ဆရာကံချွန်ရဲ့ ဇာတ်ကောင် မဖော့ ပြောသလိုဖြစ်နေပြီ။
ရေးဖို့ အခွင့်အရေး မရခင်တုန်းကတော့ ရေးစရာ ကုန်ကြမ်းတွေ စီထားတဲ့ အတွေးတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်
တကယ် ရေးဖို့ နေရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါ၊ ရေးဖို့ အခြေအနေ ပေးတဲ့အခါကျတော့ အဲဒါတွေက ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားပြီ။
ကိုယ့်ကို တည့်တည့် ပြောနေသလား မှတ်ရတယ်။
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ရဲ့ စကားလေးကတော့ မှတ်သားစရာအကောင်းသား
အချိန်တိုင်း တွေးနေရင်း ဘဝပြောင်းနေသည် တဲ့။
ဒီမတော့ တွေးနေရင်း အချိန်ဖြုန်းနေသည် လို့ပဲ ပြောရမလို။
မသိရင်တော့ တွေးတဲ့အတွေးတွေက အတွေးအခေါ်ပညာရှင်လောက်နီးနီးပဲ
တကယ်တမ်းကျ လူတိုင်း တွေးသလိုသာ လိုက်တွေးနေမိတာပါလား
သူတို့ထက် ထူးတာဆိုလို့ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အတွေးကို ချပြ ပြောပြ ဆွေးနွေးတာပဲရှိတာ။
တစ်ခါတစ်လေလဲ သူများထက်ထူးပြီး တွေးမိတာတွေကတော့ ချွင်းချက်ပဲထားလိုက်ပါလေ။
တွေးသမျှ ရေး၊ ရေးသမျှ တွေးနေတာ မှန်ပေမင့်
တွေးရုံနဲ့မရ ရေးဖို့အတွက် ရှာရဖွေရတာတွေကျ ရှာဖို့က ပျင်းပြန်ရော
မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ် တစ်စောင်ကို ကောက်ဖတ်လိုက်တိုင်း သူတို့တွေဆီက တွေးစရာ၊ ရေးစရာတွေ ထွက်လာတယ်။
လူကပဲ အလိုမကျတာတွေ ဖြစ်စေချင်တာတွေ များနေလို့လားမသိ။
လက်ရှိကို ဖတ်ထား တွေးထားတာတွေ အပြည့်။
ပြောချင်တယ် ဒါပေမင့် ပြောပြန်ရင်လဲ မာဃ လွန်ဦးမယ်။
မပြောရ မနေနိုင်လို့ နည်းနည်းတော့ ပြောလိုက်ပါမလေ။
တွေးထားတဲ့ အရာလေး ပုပ်သိုး ဆွေးမြည့်မသွားခင် ချပြလိုက်တော့ တော်သေးတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား
တစ်နေ့က ဖတ်မိတဲ့ ဂျာနယ်ထဲမယ် ယမကာကြော်ငြာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပါလာတယ်။
သွေးတိုးပဲ စမ်းသလား ပြန်လည် ခွင့်ပြုချက် ချပေးလိုက်သလားတော့မသိ။
တစ်ခုတစ်လေတောင်မဟုတ် နှစ်ခုတောင် ပါလာတာ။
သူတို့များကျတော့လဲ ကြော်ငြာအား အတော်သုံးသား။
သေသေချာချာ လေ့လာပြင်ဆင်ပြီးမှပဲ ဒီအကြောင်းတွေ ထပ်ပြောပါတော့မယ်လေ။
ဒါ အမြည်းလို့သာ မှတ်လိုက်ကြပါတော့။
ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပဲ ထပ် ဆက်ကြတာပေါ့။
လူကလဲ ရေးရင်းရေးရင်း ရေးထားတာတွေ ပြန်ကြည့်တော့ ပြုပြင်ရေးတွေ အများစု ဖြစ်နေပါလား
ဆရာလုပ်ချင်တဲ့စိတ် မကုန်သေးဘူးလို့ပဲ ပြောရမလား
ရေးချင်တဲ့ ရသစာပေအစား ဒါတွေပဲ ရေးဖြစ်နေတယ်။
ခံစားရတဲ့အတိုင်း ထွက်လာတာတွေ ရေးတာဆိုတော့ သူ့ဟာနဲ့သူသာ ရှိပါစေတော့။
တစ်ခါတစ်ခါ ကျပြန်တော့ ပြောင်းသင့် ပြင်သင့်တာတွေ ရေးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်မိပြန်ပါရော
ကိုယ်တိုင်ကရော ဘယ်လောက် ပြောင်းပြီး ပြင်ပြီးပလဲဆိုတာ။
တကယ့်တကယ် ပြောကြကြေးဆို ကိုယ်က စ ပြောင်းရ ပြင်ရမှာပါလား။
ပြောင်းချင်တဲ့စိတ် ရှိနေတာဆိုတော့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က မခက်ပါဘူးနော့
စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟောလို့ ဆိုထားတယ်မလား။
ဒီညတော့ ဘယ်တစ်ပုဒ်မှ ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မရေးဖြစ်ဘဲ အိပ်ယာဝင်ရတော့မယ်။
စောစောအိပ်ထ ပြုကျင့်ကြ တာ ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်လေ။
ညကတော့ သူ့တာဝန်ကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေဆဲ။
သူ့ သဘာဝ သူ့အလှကို ပြသနေဆဲပါလား…….
ဒီညတော့ ဒီလောက်ပဲ ညကလေးရေ။
တစ်ရက်တာအတွက် စတင် အနားယူလိုက်တော့မယ်။
ည ကတော့ တိတ်ဆိတ်နေဆဲပါလား……………………………………..
ညက တိတ်ဆိတ်နေတယ် …
နင့်ရဲ့ ဂယောက်ဂယက် စိတ်တွေပဲ …..။
ဆေးမှန်မှန်သောက် … ကျားလား .. ဆင်လား ..
ဆေးကုန်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက် …
နင့်တွက် ရွာသာကြီးက ဆေးသွားဝယ်ပြီး ပို့ပေးမယ် …
ဒါဘာဗျဲ … ငွင်းး ငွင်းး
သူနဲ့တွေ့မှ လူတောင် နေရင်းထိုင်ရင်း အရူးစာရင်းဝင်သွားတယ်
သီရိမင်္ဂလာဈေးနဲ့ Night Club တွေ လာကြည့်ပါလား။
ဒီ တိတ်ဆိတ်တဲ့ နေရာလေးမှာပဲ ခိုလို့ ကပ်လို့ နေပါတော့မယ်
အဲဒီဘက်တွေသွားမှ သိကြား အကုသိုလ်ပါ တိုးနေဦးမယ်
နတ်သမီး တစ်ထောင်ရှိနေတဲ့ ညတွေက တိတ်ဆိတ်နေသေးတာလား။
တိတ်ဆိတ်နေတယ် ပြောမှတော့ အဲဒီ နတ်သမီးတစ်ထောင်ကို နှင်ထုတ်ထားလို့ဆိုတာ
သင်္ကြန်နားနီးလို့ နတ်သမီးတွေကို အနားပေးထားတာပါဗျာ
ဒါကြောင့် တိတ်ဆိတ်နေတာပေါ့ :hee:
နောက်တခါ ညဟာ ဆူညံနေတယ်ဆိုပြီး ထပ်ရေးပေးပါ
ပြီးတော့…….
ကျုပ်တော့ ရေးစရာလေးရအောင် ခရီးထွက်ဦးမယ်ဗျို့ 
ဆူညံနေတယ်ဆိုတာကို ရေးဖို့ ကုန်ကြမ်းပတ်ရှာလိုက်ဦးမဗျို့
တစ်ခါတစ်လေကျ ဟုတ်တယ် ရေးရခက်တာတွေရှိတယ်
ဦးဆာက ရေးစရာရအောင် ခရီးထွက်တယ်
ကျွန်တော်တော့ ရေးစရာရအောင် တွေးမဗျာ………… :harr:
၁၈၈ ထုပ်ထားတာမို့ခဏတိတ်တာပါ တဂျားမင်းရယ်။ နတ်ပြည်မှာပဲလောလောဆယ်ဆယ် နတ်တမီးလေး ဒွေနဲ့နေအုံးပေါ့။ တဂျန်ပီးရင်ဒေါ့ ဒန်ဒန့်ဒန်။
အဲဒီ ဒန်ဒန့်ဒန်ကို လန့်တာ
ဖြစ်နိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းတာပဲ မြင်ချင်နေတယ်။
ညဟာ ဆူညံနေပါစေ ကျေနပ်မကွယ် :hee:
ရုတ်ရုတ် နဲ့ ဖြစ်နေလို့ 
အိမ်က ည ထွက်ရင် စိတ်မချ
ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုစခန်းသွားရပါ့ :buu:
တိတ်ဆိတ်တဲ့ည ညဟာ သတ်ပုံမှားနေတယ်……
သိကြားရေ အတူတူပါပဲ တခုခုကိုချပြရေးပြချင်ပေမယ့် စဉ်းစားစရာတွေများလာတဲ့အခါ…………။
ငါ့ဒေါသလိုတော့ ထ မအော်နဲ့နော်
ညက တိတ်ဆိတ်တယ်.. စာရေးချင်တယ်.. ရေးစရာတွေများလို့ ဘာကိုရေးရမှန်းမသိဘူး.. ရေးချင်တာတွေကလည်း အစကနေ ရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်.. အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်တယ်.. တော်လိုက်တဲ့သဂျား… ဘာမှမရေးဖြစ်ဘဲ အိပ်ယာဝင်တာ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားတယ်… Good Good Good…
တကယ်က ရေးဖို့ ပျင်းတာလဲ ပါသပေါ့
တိတ်ဆိတ်ညိမ်သက် ကြေကွဲအခန်းကျဉ်းထဲ ..
ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောချင်တယ်.. .. သတိရနေလို့.. (မျိုးကြီး)
(ရတော့ဘူး ဆက်ဆိုတော့ )
သူ့ဟာသူ ညက တိတ်ဆိတ်နေတာလည်း သဂျားအတွက်တော့ တစ်ရာဖိုး တန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်
အခုဆို တစ်ရာဖိုးတောင် မကတော့ဘူးလေကွယ့်
တစ်ခါတစ်လေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အတွေးစလေးတွေ ပြန်အစဖော်လို့မရတော့တာ သိပ်ဆိုးတယ်
စာရေးလို့ကောင်းပြီး တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညလေးတွေကိုတော့ ချစ်တယ်
ရွာထဲမှာ ညလေး ရှိသနော်
သူ့ကိုများ ပြောတာလားဟင်င်င် :harr:
လူက အပိုဆိုရင် ဘာမှ မဆောင်ချင်တာရယ်
စာဆိုရင် အမှတ်ရမယ့်စာကလွဲလို့ မရေးချင်တာရယ်
အတွေးပေါ်ရင်လဲ လက်လွှတ်မရတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်နေတတ်တာတွေရယ်ကြောင့်
နောက်မှ ရသလောက် ပြန်ထုတ်တာပေါ့ :hee:
အဲသဟာကြောင့် ခေါင်းထဲမှာလည်း အမှတ်သင်္ကေတ တွေ ကလည်းများနေပြီ….။ ဘယ်လောက်တောင်များနေလဲဆို မင်မိုရီ စတစ်ထဲတောင်ပြောင်းထည့်လို့မဆန်တော့ဘူး ……။ တိတ်ဆိတ်လွန်းတဲ့ညက ဆူညံနေပါတယ်….။ မယုံရင် တိတ်ဆိတ်တယ်ဆိုတဲ့ညတွေမှာ အသံတွေကိုနားစွင့်ထားကြည့် …..။ လုံးဝ မရင်းနှီးတဲ့ အသံတွေနဲ့ ဆူညံနေတာ တွေ့ရမယ်….။
အမှန်ပြောရင် ကိုယ့်ဇောနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ အဲဒီအသံတွေပါ ပျောက်သွားရော။
ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ နေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအသံတွေ တကယ်ဆူပါသဗျာ။
အူးမာဂ ဂျီးက ဆရာ လုပ်ချင် စိတ် မကုန်သေးဘူး ပေါ့လေ
ကျနော်ကလည်း တပည့် လုပ်ချင် စိတ် မကုန်သေးတာ နဲ့
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အူးမာဂ ရဲ့ တာဝဒိန်သာက
အပ်ဆေး ဒွေ ဖတ် ရ တာ
နတ်ဆေး သောက် ရ သလို ဘဲ မို့
နတ်ဆေးဆိုတာ အမျိုးမျိုး ရှိသလေ
တိန် ။ နတ်ဆေး နှစ်မျိုးချိမှန်း ..မတိခဲ့ဘူး ။
တူက နတ်ပြီ မှာနေတာဆိုတော့ ကျွမ်းတာပေါ့ ။
ချစ်သော…. သိကြား…ရေ ။
ကိုယ့်ထက် ရုပ်ဆိုးတဲ့ သိကြားဆိုလို့ ..ဒီသိကြားပဲ ရှိတယ် ။
ိသိကြားကို ဆော်သွားသပေါ့ :hee:
ဆိုးသော နတ်ဆေးတွေ တိုက်ပလိုက်မယ်
၀လစိန်နဲ့ ချိန်တယ်..ဆိုလို့ ….
ပြန် သတိရအောင်..ပြောပြမယ် ။
သိကြားမင်းကြီးက… လူ့ ပြည်ကို ငုံ့ ကြာ့်ပြီး..၀လစိန်လက်နက်ကြီးနဲ့ ..
ချိန်နေတဲ့ ပုံ…ပဲ ။
ပစ်တော့မယ်ပေါ့ ။ မကောင်းတဲ့ ..လူကို…။
ဒါပေမယ့်..အဲဒီ သိကြားမင်းကြီး..ဘေးက.. သိကြားမင်းရဲ့မိဖုရား..ထင်ပါရဲ့။
တူက စကားတစ်ခွန်းထဲ… ပြောလိုက်တယ် ။
လက် လည်း..မတည့် ပဲ..နဲ့ …..
ဒဲ့။
အဲဒီ ကာတွန်းလေး.သတိရသွားတယ် ။
ဟို လူတစ်သိုက်ကို… ထိအောင် ပစ်ချပေးစေလိုပါကြောင်း….
:om: :om: :om:
:om: :om: :om: :om:
:om: :om: :om: :om: :om: